हङकङमा २ दिनमा ९ जनाको मृ्त्यु ३ वर्षिय बालिका ३७ वर्षिय पुरुषको मृत्युसॅंगै ४२८५ जना संक्रमीत ७००० प्रारम्भिक केश - Gulmeli Online TV
४ फाल्गुन २०७८, बुधबार १६:५५
नारायण भण्डारी हङकङ १६ फेब्रुअरी २०२२
हङकङ स्वास्थ्य विभागको सेन्टर फर हेल्थ प्रोटेक्शन (CHP) का डा. चुआङ शुक-क्वानले आज साँझ ४.३० बजेको घोषणा अनुसार त्यहाँ ४,२८५ नयाँ कोभिड-१९ पुष्टि भएका छन र करिब ७,००० प्रारम्भिक केसहरू फेलापरेका छन।
आज घोषणा गरिएका कुल केसमध्ये १ हजार अस्पताल प्राधिकरण (एचए)बाट प्रत्यक्ष पुष्टि भएको र ३ हजार २ सयभन्दा बढीको प्रयोगशालाबाट परीक्षण गरिएको डा. तीमध्ये ४८ जनामा ​​डेल्टा भेरियन्टबाट सङ्क्रमण भएको आशंका गरिएको थियो भने ३ हजार १३८ जनामा ​​L452R भेरियन्टबाट सङ्क्रमण भएको थिएन ।
आज हङकङमा पुष्टि भएका घटनाहरूमध्ये २१ आयातित र बाँकी स्थानीय घटना हुन। उनले फागुन १४ फेब्रुवरीमा प्रारम्भिक पोजेटिभ आएका १२०० नमुनाको परीक्षण हिजोसम्म पनि पूरा नभएको बताए ।
समीक्षा गरिएका केही परीक्षण नमूनाहरू अझै निजी प्रयोगशालाहरूमा छन र अझै CHP मा पठाइएको छैन। उनले जतिसक्दो चाँडो सीएचपीमा नमूनाहरू पठाउन निजी प्रयोगशालाहरूलाई आग्रह गरेका छन।लगभग २० वटा वृद्धबृद्धाहरु बस्ने घरहरू र अपाङ्गहरूका लागि बनाईएका घरहरूले प्रारम्भिक पुष्टि भएका केसहरू रेकर्ड गरेका छन।
एचएका प्रवक्ताले भने कि हाल जम्मा २६५४ पुष्टि भएका बिरामीहरू अस्पतालमा भर्ना गरिएका छन र करिब २,००० अन्य पेनीज बे क्वारेन्टाइन सेन्टरमा क्वारेन्टाइनमा छन। पुष्टि भएका बिरामीमध्ये १७ जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ भने बाँकीको अवस्था स्थिर रहेको छ ।
आज बिहान ९ बजेसम्म विगत २४ घण्टामा कुल २३८ पुष्टि भएका बिरामी निको भएर अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन। उनले सार्वजनिक अस्पतालले परीक्षा र फलोअप परामर्शका लागि अपोइन्टमेन्टलगायत ४ देखि ५ वटा गैरआकस्मिक सेवा घटाएको र दबाब कम गर्न प्रसूति सेवा पनि बन्द गरिएको बताइन। उनले सार्वजनिक अस्पतालमा आइसोलेसन बेडको प्रयोग ९० प्रतिशत नाघेको पनि बताए । थप रूपमा, सार्वजनिक अस्पतालहरूमा १२० भन्दा बढी कर्मचारीहरुको नतिजा प्रारम्भिक रूपमा सकारात्मक आयो। लगभग २० कर्मचारीहरू उनिहरुको नजिकको सम्पर्कमा थिए। थप रूपमा भर्ना स्क्रीनिंगको क्रममा लगभग २० बिरामीहरूको नतिजा सकारात्मक आएको थिये र एउटै कोठामा १०० भन्दा बढी बिरामीहरूलाई नजिकको सम्पर्कको रूपमा सूचीबद्ध गरियो।
सरकारी अस्पतालमा कोभिड–१९ का थप ९ जना बिरामीको मृत्यु भएको छ । एचए(HA)ले हिजो घोषणा गरेको बाल अस्पतालका १०० वर्षीया महिला बिरामी र एक ३ वर्षीया बालिका बाहेक अन्य मृतक बिरामीहरूमा कारितास मेडिकल सेन्टरकी ८२ वर्षीया महिला बिरामी रहेको बताएको छ । क्वीन एलिजाबेथ अस्पतालमा ९७ वर्षीय पुरुष र ९७ वर्षीया महिला बिरामी, ईष्टर्न डिस्टिक अस्पतालमा ९० वर्षीय महिला र ३७ वर्षीय पुरुष बिरामी, ७५ वर्षीया महिला युनाइटेड क्रिश्चियन अस्पतालमा बिरामी र क्वीन मेरी अस्पतालमा 97 वर्षीय पुरुष बिरामीको मृत्यु भएको हो। उपरोक्त केसहरूसँगै हङकङमा हालसम्म जम्मा २३५ कोभिड-१९ बिरामीको मृत्यु भएको छ।